That's so good, right?: March 2016
ဒီနေရာ အဲ ဒီနေရာဟာ လူကြီးဖတ်စာအုပ်တွေရောင်းတဲ့ မြို့မြောက်ပိုင်းအဖြစ်သာမက အမှတ်၃၅ (ခ) ရပ်ကွက်ရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းလမ်း ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ အဲ့ဒီဆိုင်ဟာ နှစ်များစွာဖွင့်ခဲ့ပြီး မကြာခင်ပိတ်တော့မယ်တဲ့ဗျ။ မြို့မြောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်တိုင်း မကြာခဏဆိုသလို သွားလေ့ရှိတဲ့နေရာပေါ့။ အလုပ်ကနေ အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်တဲ့လမ်းမှာ ဆိုင်ရှေ့ရောက်တိုင်း ရှေ့ဆက် မလှမ်းဖြစ်ပဲ ဆိုင်ထဲကိုဝင်ကာ အနောက်ဖက်ခြမ်းက သန့်စင်ခန်းရှိရာဖက်ကို တိုက်ရိုက်အမြဲသွားမိတတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ နည်းနည်းဂွင်ဆင်လို့ရတာကိုး။ သန့်စင်ခန်းထဲခဏ၀င် ကျနော့်နောက်က မသိမသာလိုက်လာတဲ့လူ တစ်ယောက်ယောက်က သေးပေါက်နေတဲ့ ကျနော့်နံဘေးက အိမ်သာခန်းနံရံရှိ အပေါက်ကနေတစ်ဆင့် ကီးပေးသွားတတ်သည့် ဖြစ်စဉ်ကိုဖန်တီးပြီးမှ ထွက်ခွာဖြစ်တာ ပါပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေတော့ ရုပ်ရှင်ပြန်ခန်းရှိရာဖက်ကိုချိုးကွေ့သွားဖြစ်ပြီး အဲ့သည့်မှာ ဘာလှုပ်ရှားမှုများ ကျနော်နွှဲလို့ရ မလဲဆိုတာ စူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ပြခန်းရှိရာကိုသွားဖို့ တံခါးမကြီးကနေ၀င်လိုက်တာနဲ့ လျှောက်လမ်းတိုလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ရပါတယ်။ လမ်းအတိုင်း လျှောက်သွားကာ ညာဘက်ကိုချိုးကွေ့လိုက်မှ ရုပ်ရှင်ပြခန်းကိုဝင်တဲ့တံခါးချပ်ကို တန်းကနဲမြင်ရမှာပေါ့။ ကျနော် လျှောက်လမ်းအတိုင်း လျှောက်သွားပြီး လမ်းအဆုံးမှာ ရုပ်ရှင်ပြန်ခန်းထဲကို မသိမသာချောင်းကြည့်လိုက်တိုင်း ငနဲ ၈ယောက် သို့မဟုတ် ၁၀ယောက်လောက်တော့ ထိုင်နေတာကိုအမြဲမြင်ရတတ်တယ်။ အချို့ကတော့ စုံတွဲလေးတွေ၊ အချို့ကတော့ တစ်ယောက်တည်းထိုင်နေတတ်ကြသလို ရုပ်ရှင်ပြခန်းထဲမ၀င်ဘဲ တံခါးဝမှ သုံးလေးယောက်စုထိုင်နေကြ တာကို တွေ့ရတတ်တယ်။
ကျနော်အမြဲလိုလို ခုံနောက်ဆုံးတန်းရဲ့ ထိုင်ခုံတစ်ခုမှာ နေရာရဖို့ကြိုးစားတတ်ခဲ့တယ်။ တော်တော်နောက်ပိုင်းကျတဲ့ ခုံတန်းရဲ့ ညာဘက်မှာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းထိုင်နေတော့ အခြားတစ်ယောက်လည်းရှိနေတာကို သတိပြုမိတယ်။ သူ့ကို မိနစ်အနည်းငယ်လောက် စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် မပိန်မ၀ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အသားခပ်လတ်လတ် ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ သူက ဘောင်းဘီခွဆုံက ဖုဖုဖောင်းဖောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကို အသာအယာ ဖြေးဖြေးခြင်း နှိပ်နယ်နေတာကို သိသိသာသာမြင်ရ ပါရဲ့ သူ့ ရှက်စိတ်ကိုဘေးချိတ်ထားရော။
ကျနော်ထိုင်နေတဲ့ ခုံတန်းကနေ သူထိုင်နေတဲ့ နောက်ဖက်တန်းကိုရွေ့ကာ သူ့နံဘေးတစ်ခုံကျော်ကိုပြောင်းထိုင်ပစ်လိုက်တယ်။ ခုံနောက်တန်းကိုမှီ ကိုယ်လုံးကိုလျောချထိုင်လိုက်ကာ ပြနေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ကျနော်စကြည့်ရင်း မျက်စိထောင့်စွန်းကတော့ ဘေး တစ်ခုံကျော်ကလူ ဘာလုပ်နေလဲ မသိမသာ စပ်စုတာပေါ့နော်။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ ဇာတ်ကားအရှိန်တက်လာတာကြောင့် ကျနော်လည်း ကိုယ့်ငပဲကိုယ်ကို စပွတ်ဖိညှစ်မိတယ်။ ခပ်မတ်မတ်လေးမာလာချိန်မှာတော့ ၀တ်ထားတဲ့ Levis’ ဘောင်းဘီက ဇစ်ကလေးကိုဆွဲဖွင့် အထိန်းကြယ်သီးလေးကိုဖြုတ် ခါးပတ်ကို အသာ ဆွဲဟလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ဘောင်းဘီအတွင်းထဲလက်လျှိုလိုက်ကာ စပြီးလက်ကစားပစ်တယ်။
ကျနော့်နံဘေးက ငနဲကလည်း ကျနော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်နေတယ်လေ။ မိနစ်အနည်းငယ် သို့မဟုတ် အချိန်အတော်ကြာချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကြားက ခုံလွတ်စီကို သူပြောင်းထိုင်လာတယ်။
ရွှေ့လည်းထိုင်ပြီးရော သူ့ဘောင်းဘီကို ဒူးအထိလျောချွတ်ချလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ထိုင်ခုံနောက်တန်းကိုမှီချလိုက်တာကြောင့် သူ့ဆီးစပ်က ခြုံပုပ်ငယ်နဲ့အတူ ၅လက်မခွဲလောက်သာရှိတဲ့ ကျနော့်ငပဲထက် ပိုသော ၆လက်မကျော်လောက်ရှိမယ့် ထိပ်အရေပြားဖြတ် ထားသော ငပဲလှလှကိုမြင်ကွင်းရှင်းရှင်းကြည့်ရတာပေါ့လေ။ အာ….သဘောကျမိရုံလေးပါ။
သူ ကျနော့်ဘေးကထိုင်ခုံကိုလည်းရွှေ့ထိုင်ပြီးရော သူ့ငပဲသူမကိုင်တော့ပဲ ဒီအတိုင်းထားတယ်။ ခဏလေးတော့ ကျနော်ကြည့်နေသေးတာပါ။ နောက်တော့မနေနိုင်ဘဲ ကျနော့်လက်ချောင်းလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းရွေ့လျား တွားသွားစေကာ သူ့ငပဲကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။
သူ့လက်ကိုလည်း ကျနော့်ပေါင်ခွဆုံရှိရာလှမ်းတင်လိုက်ကာ ကျနော့်ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ဖို့အလားတူကြိုးစားပါတယ်။ ခပ်လျော့လျော့ထိုင်နေတဲ့ ကျနော် ကိုယ်ကိုမတ်ပြီးပြန်ထိုင်လိုက်ရင်း Levis’ ဘောင်းဘီကို ကောင်းကောင်းလျော့ချပစ်လိုက်တော့မှ သူ့လက်နဲ့အမိအရဆုပ်ကိုင်နိုင် ပါတော့တယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ဆုပ်ကိုင်ပြီး လက်ကစားနေကြတာ ဆယ်မိနစ်လောက်တော့ကြာ မယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ရွှေဥတွေကိုတစ်ယောက်ကအသာဖျစ်ညှစ်ကြည့်ကြတာလည်းလုပ်သေးတယ်။
နောက်တော့ သူ ကျနော့်နားရွက်နားကို ငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ “သန့်စင်ခန်းရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ် ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့။ တစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ပွတ်သပ်ကြည့်မယ်လေ။ ပြီးရင်တော့ မင်းငပဲကို ငါ-ုပ်ချင်တယ်ကွာ”
ဒူးလောက်လျောချထားကြတဲ့ ဘောင်းဘီတွေကို ပြန်မတင်ကာ နေသားကျဖို့နှစ်ယောက်သား အချိန်ခဏပေးကြိုးစားကြပြီးနောက် လျှောက် လမ်းတိုလေးဘက်ကို အခြေအနေစောင့်ကြည့်ငေး မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ရင်း ရုပ်ရှင်ပြခန်းထဲကနေ လမ်းလျှောက်ထွက်လာလိုက်ကြတယ်။
လူစိမ်းငနဲက သန့်စင်ခန်းရှိရာဘက်ခြမ်းကိုပဲ ဦးတည်ပြီး တန်းတန်းမတ်မတ်လျှောက်သွားတာများ ဘေးဘီကိုတောင်မကြည့်တော့ပါဘူး။ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ဒီလောက်ကြီး အလျင်မလိုချင်သလို အေးအေးသက်သာဖြစ်ချင်တာကြောင့် အဲ့ဒီဘက်ကိုတန်းလိုက်မသွားသေးဘဲ တိုလီမိုလီတွေရောင်းချတတ်တဲ့ စတိုးဆိုင်ဘက်ကို ခဏ၀င်သွားလိုက်ကာ စိမ်ပြေနပြေလျှောက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ပြီးမှပဲ သန့်စင်ခန်းရှိရာ ဘက်ခြမ်းကို ပြန်သွားလိုက်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံထဲကတွေ့ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း အိမ်သာခန်းတစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာရပ်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ ကျနော် သူရှိရာကို တန်းတန်းမတ်မတ်လျှောက်သွားလိုက်တော့ နောက်ဖက်ကိုလှည့်ကာ အခန်းထဲကိုဝင်သွားတာကြောင့် ကျနော်လည်းနောက်က လိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။
ကျနော် သူ့နောက်ကလိုက်ဝင်သွားလည်းပြီးရော သူက နောက်ကတံခါးကို လော့ခ်ျချလိုက်တယ်လေ။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို နှစ်ဦးသား ဘောင်းဘီတွေကို ခြေခြင်းဝတ်ထိရောက်အောင်လျောချပစ်လိုက်ကြတယ်။ ကျနော်ကတော့ ၀တ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကိုပါဆွဲချွတ် လိုက်ပြန်တော့ သူလည်းပဲလိုက်ချွတ်တယ်လေ။ နှစ်ဦးသား ဗလာကိုယ်တည်းဖြစ်ကုန်ရောဆိုပါတော့။
ကြွေကမုတ်အဖုံးကိုပိတ် အနံ့အသက်ကင်းအောင် ခဏစောင့်ပြီးနောက်မှာတော့ သူ ကျနော်ရှိရာကိုမျက်နှာပြန်မူလာပြီး သူ့လက်ချောင်း တုတ်တုတ်တွေနဲ့ ကျနော့်ငပဲကိုအသာဆုပ်ကိုင်ပါတယ်။ တရမ်းရမ်းနဲ့မာတောင့်နေတဲ့သူ့ငပဲကိုလည်း ကျနော့်လက်နားတိုးကပ်ပေးပြန် တာကြောင့် ကျနော်လည်းပဲ ပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ နှစ်ဦးသား စတင် လက်ကစားကြပါတယ်။
တစ်မိနစ် သို့မဟုတ် ဒီထက်ပိုချင်လည်းပိုမယ် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်ကာ လက်ကစားနေကြရာက နှစ်ဦးသား အုတ်နံရံကိုကျောမှီလိုက်ကြကာ ဘေးခြင်းကပ်ရပ်ရင်း အားရပါးရကိုင်တွယ်ပြီး မာကျောမှုကို လက်နဲ့ပိုထိတွေ့ခံစားကြတာများ အရည်ကြည်အချို့တောင်စို့ထွက်စပြုလာကြ ပါတယ်။
နှစ်မိနစ်လောက်ပဲဆိုပေမယ့် အကြာကြီးလို့ယူဆရချိန်မှာတော့ နှစ်ဦးသား ပိုပိုပြီးရင်ခုန်သံတွေမြန် အသံရှူသံတွေပြင်းလာကြတာ ကိုင်ထားတဲ့ ငပဲတွေကိုမလွှတ်မိသလို လက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း မရပ်တန့်မိကြပါဘူး။ သူက “ငါ မင်း-ီးပေါ်ကို သုက်ရည်နဲ့ပန်းချင်တယ်၊ ပြီးတော့ မင်း-ီးပေါ်ပေနေတဲ့ ငါ့သုက်ရည်ကိုငါပြန်ပြီး စုပ်မြိုချင်တယ်ကွာ”တဲ့။ ကျနော်ဘာပြောရမှာလဲ သူပြောတဲ့အတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လိုက်လျောလိုက်ပါတယ်။
သူ့ငပဲကိုသူ ညာလက်နဲ့ အားရပါးရကိုင်တွယ်ကစားချိန်မှာ ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ကျနော့်ငပဲကိုမလွှတ်ဆုပ်ကိုင်ထားတာက ပူနွေးနေတာပါပဲ။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့သူ့သုက်ရည်တွေ ကျနော့်ဆီးစပ်က အမွှေးစုလေးနဲ့အတူ ငပဲအတံတလျောက် ပက်ဖြန်း လိုက်တာကို ခံစားရမိပါတယ်။
သူ့ရွှေပြွန်ထဲက သုက်ရည်တွေအကုန်ပန်းထုတ်အပြီးမှာတော့ ကျနော့်ရှေ့တည့်တည့်မှာ သူဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ရင်း သုက်ရည်ဖြူပျစ်ပျစ် တွေဖုံးနေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကို ပူနွေးနေတဲ့ သူ့အာခံတွင်းထဲငုံသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျနော် ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ကိုငုံ့ကိုင်းကြည့်လိုက်ရာမှာတော့ ကျနော့်ငပဲခေါင်းလေးဟာ နုညံ့ပြီးထူအမ်းတဲ့သူ့နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲ တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်ရင်း တစ်လက်မပြီး တစ်လက်မ သူ့ပါးစပ်ထဲပျောက် ကွယ်သွားပါရော။ ကျနော် သူ့နှုတ်ဖျားက မသဲမကွဲ ညည်းညူသံကို “Mmmmmmmmm” ကြားလိုက်ရသလို မျက်နှာကိုမော့ကြည့် လာတာကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ နှစ်ဦးသားအကြည့်ဆုံမိခဲ့တာပေါ့ ခဏတော့။ သူ့ပါးစပ်ဟာ မာတောင့်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကြီးနဲ့ပြည့် နေသလို သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာလည်း အတံတလျောက် ခပ်တင်းတင်း ရစ်ဝိုင်းထားပါတယ်။
သူ့ဦးခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း ကျနော့်ငပဲကို ဆာလောင်နေတဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်မိတာမှာ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်ရလာတော့ ကျနော့်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ထင်ပါတယ် လည်မျိုထဲထိတိုင်ရောက်ရောက်သွားသလို ကျနော့်ရွှေဥတွေဟာလည်း သူ့မေးစိကို တဖတ်ဖတ်ရိုက်နေတော့တာ တစ်ခါတစ်ခါ သူ သီးတောင်သီးတယ်။
အရာအားလုံးဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်မှာ ကျနော်သိပ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ အလိုလိုသိလာတယ်။ လိင်တံတလျောက် လျာအပြားလိုက်ကပ် ကာလျက်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကော ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်မျိုမှုကြောင့်ကော ကျနော့်ရွှေဥတွေကိုပူနွေးနေတဲ့သူ့အာခံ တွင်းထဲ အထုတ်အသွင်းပြုလုပ်တာကြောင့်ကောပါမယ်ထင်ပါတယ်။
နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ အထွဋ်အထိပ်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်တည်လာတာကြောင့် သူ့ဦးခေါင်းကိုထိန်းကိုင် ကျနော့်ငပဲကို အာခံတွင်းထဲ အဆုံးထိဖိသွင်းရင်း တင်ပါးတွေကိုကြုံ့ကာကြုံ့ကာဖြင့် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝလေးကနေ သုက်ရည်တွေကို သေနတ် တစ်လက်လို စပစ်မိခဲ့ပါတယ်။ ငပဲကိုလည်း ပါးစပ်ထဲရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင် ဖိဖိသွင်းတာပေါ့နော်။ အိမ်သာနံရံကို ကျောမှီထားရင်း ကျနော့်ငပဲကိုတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲဖိကပ်သွင်းထားဆဲ့အနေအထားနဲ့ မတ်တပ်ရပ်နေလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ကျနော့်ငပဲကိုဆက်လက်စုပ်ပြု နေသလို ကျနော့်သုက်ရည်တွေ အကုန်မျိုချရော။ ဆီးခုံမွှေးပေါ်က လက်ကျန်လေးတွေကော ရွှေဥပေါ်က သုက်ရည်လက်ကျန်လေးတွေကိုပါ အကုန်ဖြတ်ပါတယ်။ ကျနော့်လိင်တံကို တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပြန်စုပ်မှုတ်ပြီးနောက် ရှိသမျှသုက်ရည်တွေမကျန်အောင် လျှာနဲ့သန့်စင် ကာ သူကျေနပ်လောက်ချိန်ကျမှ ရပ်ပါတော့တယ်။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား အ၀တ်အစားသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြန်လည်ဝတ်ဆင်လိုက်ကြရင်း အိမ်သာအခန်းအပြင်ဘက်လူရှိမရှိ တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ နောက်တော့ အချိန်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်ကြ ရင်း လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့။
နောက်တစ်ကြိမ် နောက်တစ်ရက်ရောက်ပြန်တော့ ဟိုရက်တွေက အမှတ်မထင်ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကို ပြန်တွေးဆမိကာ DVD ခွေတွေ စာအုပ်အသစ်တွေရှိရာဘက်ကို မလှမ်းတော့ဘဲ ရုပ်ရှင်ပြခန်းဘက်ကို တိုက်ရိုက်သွားဖို့ ကျနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အရင်နေ့က တွေ့ခဲ့တဲ့ငနဲနဲ့ ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေး ခပ်ပါပါနဲ့ သွားတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလူကို မတွေ့ရပါဘူး။ ကျနော် ဇာတ်လမ်း ခွင်လာဆင်တာ အချိန်စောလို့လားမသိဘူး ရုံထဲမှာလူသိပ်မရှိဘဲ နှစ်ယောက်လောက်သာ ဟိုတစ်ယောက် သည်တစ်ယောက်ခွဲထိုင်နေကြ တာမြင်ရပါတယ် ပိတ်ကားနဲ့နီးတဲ့ရှေ့ပိုင်းနားမှာပေါ့။ အင်း ကောင်းပါတယ်ပေါ့လေ….ပြနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုပဲငေးကြည့်နေလိုက်တယ် တစ်ခုခုတော့ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်လာမှာပါ။
၀တ်ထားတဲ့ Levis’ Jeans ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးလည်းမဖြုတ် ဇစ်လည်းမဟ လက်လည်းမလျှိုဖြစ်ဘဲ ငပဲရှိရာ အတွင်းခံထဲစောင်းထဲ့ထားတဲ့ အခြမ်းဘက်ကို အပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်နေလိုက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ရုတ်တရက် ရုံထဲဝင်လာခဲ့ရယ် တင်ထားတဲ့ လက်ကို ရုပ်သိမ်းထားလိုက်တော့ ဘာမှမဖြစ် သာမန်ပဲဆိုတဲ့အသွင်ရောက်တယ်လေ။
နောက် နာရီဝက်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ ငနဲအတော်များများ ရုံထဲဝင်လာကြာကာ ခုံအသီးသီးမှာထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ ကျနော်ဝင်ထိုင်နေရာ ခုံတန်းမှာတော့ တစ်ယောက်မှဝင်မထိုင်ပါဘူး။ အနီးစပ်ဆုံးကတော့ ရှေ့ခုံတန်း ကျနော်ထိုင်နေတဲ့ခုံညာဘက်ခြမ်း လောက်မှာ စုံတွဲတစ်တွဲလာထိုင်တယ်။ ငနဲနှစ်ပွေပေါ့ဗျာ။ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ဘေးကလူရဲ့ပခုံးကိုကျော်ပြီး မသိမသာ ကျနော် ဘာလုပ်နေလဲ စွေစောင်းကြည့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ အခြားဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရမယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ပြန်ခန်းထဲ ကျနော်တို့အပြင် လူ ၇ ယောက် သို့မဟုတ် ၈ယောက်မကရှိပါတယ်။ နောက်တော့ ရုပ်ရှင်ပြခန်းထဲ တစ်ယောက်ယောက် ၀င်လာသံကို ကျနော်ကြားရပါတယ်။ မျက်ခွံပင့်ကြည့်လိုက်တော့ ငနဲတစ်ပွေ ကျနော်ထိုင်နေတဲ့ခုံတန်းရဲ့ တစ်ဖက်စွန်း မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတာကို မြင်လိုက်ရတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ ပုံစံပေါက်တယ် အဲ ဘယ်လိုပြောရမလဲ လူငယ်ဆန်တဲ့ အ၀တ်အစားမျိုးမဟုတ်ဘူး သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ formal ကျတဲ့ပုံစံတွေဝတ်ထားတာဗျ။ သူ ခဏလေး မတ်တပ်ရပ်နေရင်းမှာ အပေါ်ခေါင်မိုး ပေါ်က dim light ကိုတစ်ချက်သေချာကြည့်လိုက်ကာ ကျနော်ထိုင်နေတဲ့ခုံတန်းအတိုင်းဝင်လာပြီး ကျနော်နဲ့ နှစ်ခုံအကွာမှာဝင်ထိုင်လိုက် ပါတယ်။
ကျနော် ထိုင်နေတဲ့ခုံပေါ်ကို သာခွေယိုင်အနေအထားနဲ့လှဲလျောင်းလိုက်ရင်း ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို အသာခွဲ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ရှေ့ခုံနောက်မှီနဲ့ ထိန်းထားတဲ့ပုံစံ နေလိုက်ပါတယ်။ နှစ်မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ ထိုင်ခုံနောက်ကိုအသာမှီချလိုက်ရင်း ခါးစပ်က ဂျင်းဘောင်းဘီအထိန်း ကြယ်သီးတစ်လုံးကိုဖြုတ်ကာ လက်လျှိုသွင်းလိုက်ရင်း ငပဲကို ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်မိရောပေါ့။
ကျနော်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာထိုင်နေတဲ့ ငနဲကို အသာစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ ကျနော်ပေါင်ခွဆုံရှိရာက လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှ ကိုငေးကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။
နည်းနည်းတော့ အပြ၀ါသနာပါတယ်လို့ပြောရမလားပဲ ကျနော့် မာတောင့်နေတဲ့ငပဲကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီးကစားနေတာကို တခြားသူ စောင့်ကြည့်နေတာကို သဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော် နည်းနည်းလောက်တော့ ငနဲကြီးကိုပြလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုထားတာကို ထုတ်၊ ဇစ်တွေဖြုတ် ကြယ်သီးတွေဖြုတ် ဂျင်းဘောင်းဘီကို ဒူးအထိလျှောချလိုက်ရင်း အတွင်းခံဝတ် ထားဆဲအနေအထားမှာ နေလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ရဲ့ လှုပ်ရှားစွဲဆောင်လိုက်မှုက ကျနော်ထိုင်နေတာရဲ့ရှေ့ခုံတန်းက ငနဲခမျာ ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ အသာစောင်းငဲ့ကြည့် မိစေပါရော။ အခုတော့ ကျနော် သူတို့တွေရဲ့ အာရုံစိုက်သတိထားခံရတဲ့အခြေအနေရပြီဆိုတော့ အတွင်းခံထဲက မမာ့တမာဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကို ပိုမိုမာကျောစေဖို့ ငြင်ငြင်သာသာ အပေါ်ကနေပွတ်သပ်လှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်နံဘေး ခုံနှစ်ခုံကျော်ကငနဲကြီးကို မသိမသာကြည့်လိုက်တော့ သူ ကျနော့်ပစ္စည်းကို ပိုမိုမြင်ရဖို့အရေး ပိုမိုတိုးကပ်ငဲ့စောင်းကြည့်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။
တစ်မိနစ် သို့မဟုတ် နှစ်မိနစ်လောက် သူတို့ကို ကလိပြီးနောက်မှာတော့ ကျနော့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ခပ်ဖြေးဖြေးအောက်ကိုလျှောချွတ် လိုက်ကာ မာတောင့်နေတဲ့ငပဲကြီးကို လွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ် အကုန်မြင်တွေ့နိုင်တာပေါ့။ ကျနော်စတင်ပြီး masturbate လုပ်ပါပြီ။ တကယ့်ကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေး လက်ကိုထိပ်ပိုင်းလေးရောက်သွားစေလိုက် ရွှေဥတွေနဲ့ထိတဲ့အထိရွေ့သွားလိုက် ပွတ်သပ်လိုက်နဲ့ အလုပ်များ စေပါတယ်။ မျက်စိထောင့်စွန်းကနေ ကျနော်လှုပ်ရှားသမျှကို အခုတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့ငနဲကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ သူ ရုပ်ရှင်အပေါ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တောင်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။
ကျနော် ခပ်စောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲ ကျနော် လိင်စိတ်အာသာဖြေနေစဉ်မှာ တစ်ယောက်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေတာကို ကျနော် သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း သူတို့ကြည့်နေလဲ ဘာမှမဖြစ်သလိုဆက်ပြီးလုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ အစပိုင်းကတော့ ထိပ်ပိုင်းလေးကိုင်ကစား လိုက် အရင်းလေးကိုင်ကစားလိုက် ခပ်ဖြေးဖြေးပေါ့ နောက်တော့ ခပ်မြန်မြန်လေးလှုပ်ရှားပစ်လိုက်တာပဲ။ လိင်တံအရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အဖျားကို သုံးလေးကြိမ်လောက် ရမ်းခါပစ်လိုက်တယ် တုန်ခါစက်လှုပ်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲလေ။
ကျနော့်နံဘေး နှစ်ခုံကျော်ကငနဲကြီးခမျာ ကျနော့်ငပဲနဲ့ သူမျက်လုံး ကော်ကပ်ထားတဲ့အတိုင်း နေရာမရွေ့ကြည့်ရင်း စားတော့ဝါးတော့မတတ် ဟန်ပေါက်လာပါတယ်။ ကျနော် ဒီငနဲကြီးတော့ သူ့ထိုင်ခုံကနေထတဲ့ပြီး ကျနော့်နံဘေးလာထိုင်တော့မယ်လို့ထင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့သူက သူ့ထိုင်ခုံကနေ တစ်လက်မမှမရွေ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော် ဆက်လက်ပြီး လက်ကစားနေလိုက်တယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်အာသာဖြေနေတာကို လူနှစ်ဦးကြည့်နေခြင်းကို စိတ်လှုပ်တရှားခံစားရင်းပေါ့နော်။
ကျနော့်ရှေ့တည့်တည့်ခုံတန်းက စောင်းငဲ့ကြည့်နေတဲ့ ငနဲရှိရာဘက်ကို မတ်ထောင်နေတဲ့ ငပဲခေါင်းကိုလှုပ်ရမ်းပြကာ မထိတထိကလိလိုက် တယ်။ ကျနော့်ငပဲခေါင်း ထိပ်ဝလေးကနေ အရည်ကြည်အချို့ စီးစိမ့်နေတာ အကြိမ်ရေများလာပြီပြောရမယ်။ အရည်ကြည်ထွက်တာ ပမာဏ နည်းနည်းများချိန်ဝယ် လက်ပေါ်စီးကျလာတဲ့ဟာတွေကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ လျှာနဲ့လျက်ပြုလိုက်တယ်။ ကျနော် ကိုယ့်သုက်ရည်ကြည်ရဲ့ အရသာကိုမြည်းစမ်းရတာလည်း သဘောကျပါတယ်လေ။ ကျနော် လုပ်ဆောင်နေတာကို ငေးကြည့်နေတဲ့ နံဘေးခုံကငနဲကြီးက ကျနော့်လက်ချောင်းတွေကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ အရည်ကြည်တွေလျက်ပြုလိုက်ချိန်ဝယ် သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုသူ လျာထုတ်ပြီးလျက်ပြု လိုက်ခြင်းကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။
လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် အဲ့သလို ဟိုသည်လှုပ်ရှားနေပြီးတဲ့နောက် ကျနော်မကြာခင် ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတာ ခံစားသိရှိ လာမိတာ အသေအချာဖြစ်လာတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ကျနော့်ရှေ့ကခုံတန်းက ငနဲက နောက်ကိုလှည့်ကြည့်သလို မလှမ်းမကမ်း နံဘေး ခုံက ငနဲကြီးကလည်း မျက်လုံးတွေ ပေါက်ကွဲထွက်တော့မတတ်စိုက်ကြည့်ပါရော။ ကျနော်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို အစွန်းဆုံးထိတွန်းတင် လိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်မိရသလို ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ကြည့်မြင်ချင်စိတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနော် ခဏငြိမ်နေရာကနေ တဖန်ပြန်ပြီး လက်ကစားတဲ့ကိစ္စ စလုပ်ပါတယ် မာန်ပါပါ ဟန်ပါပါ တင်ပါးတွေကိုကြွလိုက် ပြန်ထိုင်လိုက် ခါးကိုမသိမသာ ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်လုပ်မိလိုက် ပေါ့။ ကျနော့် နံဘေးမလှမ်းမကမ်းမှာထိုင်နေတဲ့ငနဲက ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော် ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်ကာ သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်မယ့်အချိန် အလဟဿမဖြစ်စေချင်ဘူးထင်ပါတယ် ထိုင်ခုံကနေ ဖင်တကြွကြွဖြစ်လာပါတယ်။
သူ ခပ်မြန်မြန်ပဲ သူ့ထိုင်ခုံက ထထွက်လိုက်ကာ ကျနော့်နံဘေးကခုံဝယ်လာထိုင်ပါတယ်။ နောက်တော့ ကျနော့်ပေါင်ခွဆုံရှိရာရှေ့ကို ငုံကိုင်း ချလိုက်ရင်း သူ့ပါးစပ်ကိုဖွင့် ကျနော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကိုသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျနော့်မှာ တကယ့်ကို ပြီးကာနီးအထွဋ်အထိပ်ဖြစ်နေချိန် ဆိုတော့ သူ့ဦးခေါင်းကို ညာဘက်လက်နဲ့ထိန်းကိုင်လိုက်ကာ ငပဲအရင်းထိ နှုတ်ခမ်းများနဲ့ကပ်သွားအောင် ဖိဖိပေးလိုက်မိတယ်။ တစ်ချိန် တည်းမှာပဲ ကျနော့်တင်ပါးတွေကိုကျစ်ကာ မာတောင့်နေတဲ့ငပဲကို သူ့အာခံတွင်းထဲ ပိုပိုရောက်အောင် ပင့်ပင့်သွင်းပေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့တန်းကခုံကလူကတော့ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကို မကြည့်တော့ဘဲ ကျနော်တို့ဖက်ကို လှည့်ထိုင်ကာ အားရပါးရ အားပေးပါတယ်။ ကျနော် ရုပ်ရှင်ပြခန်းထဲကို ဟိုသည် စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့ ငနဲတွေအတော်များများ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကိုအာရုံမစိုက် တော့ဘဲ ကျနော်တို့လှုပ်ရှားသရုပ်ဆောင်နေတာတွေကို နောက်ပြန်လှည့်ထိုင် စောင့်ကြည့်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အားလုံးလိုလိုရဲ့ သတိထားအာရုံစိုက်မှုတွေက ကျနော့်ကို ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုပေးနေသလိုပါပဲ။
ကျနော် ငနဲကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကို ငပဲတစ်ချောင်းလုံးပါးစပ်ထဲရောက်အောင် ဖိဖိနှိမ့်ကိုင်မိဆဲဖြစ်သလို တင်ပါးတွေကိုကျစ်ကာ ပင့်ပင့်တင်ရင်း ခပ်သွက်သွက် တပြိုင်တည်းကစားဖြစ်ပါသတဲ့။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှူသံတွေ ပိုမိုပြင်းထန်လာကြသလို ကျနော်သည်လည်း အဆုံးသတ် သုက်ရည်ပန်းထုတ်ဖို့နီးကပ်လာပါတယ်။ ကျနော် မွတ်သိပ်စွာဖြင့် ခပ်သွက်သွက် ခပ်မြန်မြန် ပင့်တင်ဘောတွေရိုက်သွင်းတာ ဆက်တိုက်ပါပဲ။ ကျနော့်ငပဲခေါင်းတွေ တင်းကြပ်လာသလို ရွှေဥတွေလည်း ကြပ်သထက်ကျစ်လာတာကို ခံစားရပါတယ်။ နောက်တော့ “Uuuuuuugh” ရုပ်ရှင်ပြခန်းထဲက လူတွေအကုန်ကြားရလောက်သည့်အသံနဲ့ အော်ညည်းလိုက်ရင်း သုက်ရည်တွေအကုန် ဆင့်ကာဆင့်ကာ ငနဲကြီးရဲ့ လည်မျိုထဲကို ပန်းသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့လည်မျိုက ကျနော့်ငပဲကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး လျှာများက ရစ်သိုင်းကာ ကျန်ရှိနေတယ်ထင် ရသော သုက်ရည်တွေကို စုပ်မျိုနေသလား ခံစားရတယ်ဆိုရမယ်။
ကျနော် သူ့ဦးခေါင်းကိုမလွှတ်သေးဘဲ ဆက်လက်ဖိထားကာ နှုတ်ဖျားကလည်း “Mmmmmmm” လို့ ဆက်လက်ညည်းညူမိရင်း တံတွေးကို ဂလုကနဲမြည်အောင် မျိုချမိရပါတယ်။ အစတုန်းက လှည့်မကြည့်ဖြစ်တဲ့ ငနဲအချို့ကလည်း နောက်တန်းမှာဘာဖြစ်နေလည်းဆိုသည့်သဘော နဲ့ လှည့်ကြည့်ပြီး အတန်ကြာတိုင် ရှေ့ကိုပြန်မလှည့်ကြတော့ပါဘူး။
တင်ပါးလေးကိုကျစ်ကာ ကျစ်ကာနဲ့ သူ့လည်မျိုထဲထိတိုင် ငပဲကိုပင့်ပင့်သွင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်း တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် လေးကြိမ်တိုင် ဆက်လက်ပင့်တင်ရင်း နောက်ဆုံးလက်ကျန် သုက်ရည်အချို့ကိုပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။
တစ်နာရီလောက် အသားကုန်ဆွဲ သုက်ရည်ပန်းထုတ်ထားတာတောင် ကျနော့်ငပဲက နည်းနည်းလောက်ခေါင်းမာချင်နေသေးတာကို ရိပ်မိရ တာကြောင့် ထိုင်ခုံမှာဖင်ပြန်ချထိုင်မိသော်လည်း ဟိုလူရဲ့ဦးခေါင်းကို လွှတ်မပေးမိသေးဘဲ ထိန်းကိုင်ထားမိပါတယ်။ သူကလည်း မလွှတ်သေး ဘဲ ခေါင်းကိုတလှုပ်လှုပ်နဲ့ကစားက ငပဲခပ်တုတ်တုတ်ကို အားရစဖွယ် ပါးစ်ပထဲအထုတ်အသွင်းဆက်လုပ်နေပြန်ပါရဲ့။
သူ ကျနော့်ငပဲကို ဆက်လက်စုပ်ပြုနေသလို ရွှေဥတွေကိုလည်း ချောကလက်ကိုလျာနဲ့လျက်တဲ့အတိုင်း ဆယ်မိနစ်မက လျက်ပြုနေသေး တာပါ။ နောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်လောက် အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်ပြီးမှ မမာ့တမာ ကျနော့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲကထုတ် ရင်း ထရပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
သူတို့ထိုင်နေတဲ့ခုံကနေ လှည့်ကြည့်နေတဲ့လူတိုင်းနီးပါးဟာ ရုပ်ရှင်ပြနေရာ ပိတ်ကားရှိရာဘက်ကို မျက်နှာပြန်မူသွားကြပြီးနောက်မှာတော့ ကျနော်နဲ့ ဟိုလူကြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ ကျနော် ဒူးနားရောက်နေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကော Levis’ ဂျင်းဘောင်းဘီကော အပေါ်ပြန်ဆွဲတင်ဝတ်ဆင်လိုက်ရင်း ရုပ်ရှင်ပြခန်းက ထွက်ခွာလာလိုက်ကာ အိမ်ပြန်လမ်းဆီကိုဦးတည် မိပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအစကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့ဗျာ အခုတော့ လူကြီးစာအုပ်တွေ ရုပ်ရှင်ခွေတွေ အရုပ်တွေရောင်းသလို လူကြီးရုပ်ရှင်တွေပြ စတိုးဆိုင်ပါ ရှိတဲ့ အဆိုပါအဆောက်အအုံဟာ ပိတ်သိမ်းသွားတာ နှစ်အတော်ကြပါပြီ။ သူတို့ပိတ်သိမ်းသွားပြီးနောက်မှာတော့ ကျနော့်မှာ အတွေ့အကြုံ ကောင်းတွေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ရပ်တွေကိုရဖို့ အခွင့်အလမ်းမရှိတော့သလိုပါ။ ကျနော် တကယ့်ကို အဲ့သည့်နေရာကိုသတိရမိပါတယ်။ ပြောစရာဇာတ်လမ်း နှစ်ကြိမ်တိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာလေးမဟုတ်လား။ ခပ်မြန်မြန်လေး ဟိုသည် ငေးရင်း ငမ်းရင်း ခပ်သွက်သွက်လေး blowjob လုပ်ပေးတာကိုလက်ခံရင်း မနှေးမမြန် အိပ်ပြန်ဖြစ်တဲ့ညတွေကို လွမ်းမိတယ်ဆိုပါတော့။ ဒါပေမဲ့လည်းလေ နှစ်ကြိမ်ဆိုရင် နှစ်ကြိမ် ဆိုသလောက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာများစွာ ရရှိခဲ့တာ အနန္တပါပဲ။
Alex Aung (29 March 2016)
Note: စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Erotic ၀တ္ထုလေးတွေကော၊ အချစ်ဝတ္ထုလေးတွေ၊ အသိပညာပေးဆောင်းပါးလေးတွေကော၊ပြီးတော့ ဘာသာပြန် ဆောင်းပါးလေးတွေကော ရေးသားဝေငှလာတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးဖြစ်လာပါပြီ။ စာရေးဆရာမဟုတ်ပေမဲ့ blogger တစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့် ရခဲ့တာကို အခုထိဝါသနာပါဆဲပါ။ အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ အခုတော့ နယ်မှာပြန်နေဖြစ်ဖို့အချိန်တန်လာပြီဆို တော့ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကောင်းမကောင်းပေါ်မူတည်ပြီး စာတွေဆက်ရေးသွားပါမယ်။ ခါတိုင်းလိုတော့ တစ်လဘယ်နှစ်ပုဒ်ဆိုပြီး ပုံမှန် မဟုတ်တော့ပေမယ့် တတ်နိုင်သမျှရေးသွားပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။ ကျနော့်ကို မေ့မသွားပါနဲ့ဦးနော်။
စာရေးဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် E-mail address: kyawkyawster@gmail.com ဖြစ်ပြီး
Facebook Page: http://www.facebook.com/alex.aung နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
တဖြည်းဖြည်းနက်ရှိုင်းလာသော နွေဦးညတွင် လမင်းကြီးက သိပ်သည်းစွာ သာယာ နေသည်။ ပျင်းရိလေးတွဲ့စွာ စီးဆင်းနေသော မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးကို ညှင်းလေနုနုက ကျီစယ်ချော့မြူပေးနေ၏။ သောင်ပြင်သဲများက လရောင် အောက်တွင် ဖွေးဖွေးလက်နေသည်။ အင်းဆက်ပိုးကောင်းများ၏ အော်သံများနှင့် မြစ်ရေစီးသံအိအိလေးက ဂန္တ၀င်တေးသွား တစ်ပုဒ်ထက်ပင် ပိုမိုငြိမ့်ငြောင်းနေသည်။
ကမ်းနှင့် ခပ်ဝေးဝေး သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် လူနှစ်ယောက်ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေကြ၏။ နုပျိုငယ်ရွယ်သော ကောင်လေးနှစ်ယောက်၊ သူတိ့နှစ်ယောက်ကြားတွင် လှပသပ်ရပ်သော မင်္ဂလာဖိတ်စာတစ်စောင်က ငြိမ်သက်အေးဆေးစွာ လဲလျှောင်းစည်းခြားထားလေသည်။
အသေအချာနားထောင်ကြည့်လျှင် ခပ်စိပ်စိပ်ကြားရသော သက်ပြင်းချသံများနှင့်အတူ ရိုက်သံသဲ့သဲ့များကို ကြားနိုင်လိမ့် မည်။ တံတွေးမျိုချလိုက်သံတစ်ချက် ပီပီသသထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ပီသတိကျသော စကားသံတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်။
“ဟာ ဟေး ကောင်လေး ရှက်မနေနဲ့။ ပြော ချစ်တယ်လို့ပြော။ မရဘူးကွာ”
“ကဲပါ ဟုတ်ပါပြီ။ နားထောင်….ပြောမယ်။ အရမ်းချစ်တယ်ဗျာ။”
“ဟေ ဟေးးးးးးးးးးးးး။ ပျော်တယ်ကွာ။ အရမ်းချစ်တယ် ကလေးရာ။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။”
တစ်ဘ၀လုံးအတွက် ရည်ရွယ် ရည်စူးပြီး ချစ်ခဲ့ရသောချစ်သူလေးနှင့်ရိုးမြေကျ ပေါင်းသင်း နေထိုင်သွားရန် စိတ်ကူးရုံဖြင့် ကြည်နူးမှုများက ရိုးတွင်းချဉ်ဆီများထိတိုင် စိမ့်ဝင်စီးဆင်းသွားခဲ့ရသည်။
အချစ်၊ နားလည်မှု၊ သစ္စာ၊ အယုအယနှင့် မေတ္တာအပါအ၀င် ယုံကြည်မှုပေါင်းများစွာဖြင့် တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းထားသော သူတို့နှစ်ယောက်၏ ဆက်ဆံရေးသည် ပြက္ခဒိန်ပေါင်းများစွာကို အနိုင်ယူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သေးသည်။
သို့သော် စိတ်ကူးနှင့် ဘ၀၊ အိပ်မက်နှင့် လက်တွေ့ ယှဉ်တွဲပြိုင်ဆိုင်လာသည့်အခါ ခါးသီးဖုထစ်သော ဘ၀အဆစ်အကွေ့ များ ပေါ်ပေါက်လာရပြန်သည်။
“ဟဲ့ ဘာတွေလည်း၊ ကျားကိုက်လိမ့်မယ်။ မိုးကြိုးပစ်လိမ့်မယ်။ နင်တို့တွေ မရှက်ကြဘူးလား။ အသိဥာဏ်မရှိကြဘူးလား။ တိရိစ္ဆာန်တွေလား....”
ကိန်းခန်းကြီး ရှေးရိုးဆန်သော မိဘများအကြား အချစ်တစ်ခုသည် မှားယွင်းမှု မဟုတ်ကြောင်း ပြသရန် ခဲယဉ်းလွန်းလှ သည်။ အစဉ်အလာ၊ မျိုးရိုးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ရှေ့တန်းတင်းလွန်းကြသော လူကြီးများအကြား အချစ်ပန်းလေးတစ်ပွင့် နွမ်းလျှညှိုးငယ်လာရသည်။
“သားကြီး.... မင်း...... သူငယ်မကို မယူလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ ဖေဖေတို့အခြေအနေကို သားလည်းသိပါတယ်။... သူ့အဖေနဲ့....... ပြန်လည်ရုန်းကန်ဖို့........ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်.. မင်းနားလည်နိုင်ဖို့.......... ဖေဖေတို့ မိသားစုကို..........................................”
မကြားတစ်ချက် ကြားတစ်ချက်ဖြင့် နားထောင်နေရသော စကားများသည် အင်မတန် ရိုးရှင်းကာခေါက်ရိုးကျိုးနေသော အကြောင်းပြချက်များဖြစ်သော်လည်း တိကျခိုင်မာလွန်းသော နှောင်ကြိုးများပမာ ရုန်းကန်ထွက်ပြေးရန် မဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေများကြောင့် မိန်းမ တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရန် သူ ခေါင်းငြိမ့်(ငုံ့) လက်ခံခဲ့ရသည်။
အလန့်တကြား ခေါ်မိလိုက်သော်လည်း ကလေးက လုံးဝတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ။ လက်ကာပြကာ တည်ငြိမ်စွာပင် စကားကို ဆက်ပြောလိုက်သည်။
“ဟုတ်တယ်ကိုကို၊ ကိုကိုသူ့ကို လက်ထပ်လိုက်ပါ။ သာယာလှပတဲ့ မိသားစု ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်ကောင်းတစ်ယောက်၊ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ ကိုကို။”
“ကလေးက.......... ကလေးက.. ဘာလို့။ ဘာလဲ ကိုကို့ကိုမယုံတာလားဟင်။”
လှုပ်ခါထစ်ငေါ့နေသော စကားလုံးများက နှုတ်ခမ်းဖျားမှ ပွင့်အံထွက်ကျလာချိန်တွင် ပူလောင်စိုထိုင်းသော မျက်ရည်များက ပါ တပါတည်း ပါးပြင်ပေါ်သို့ လိမ့်ဆင်းစီးကျလာ၏။
“အားလုံးကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုကို။ ကလေးအားလုံးကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုကို့ ကိုရော ပြီးတော့ ကလေး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရော ယုံကြည်ပါတယ်။”
“ဒါဆိုရင်... ဒါဆို၊ အဲဒါဆိုရင် ဘာလို့ အဲဒီလိုစကားတွေပြောထွက်ရတာလဲ၊ ကိုကိုတို့... ကိုကိုတို့နှစ်ယောက် တည်ဆောက် ခဲ့တာတွေက မနေ့တစ်နေ့ကမှ မဟုတ်တာ။ ဘ၀တွေက........”
“ခေါင်းမမာစမ်းပါနဲ့ကိုကိုရယ်။ ကလေးတို့အနေနဲ့ တစ်ချို့တစ်ချို့သော အကြောင်းအရာတွေကို ငဲ့ကွက်ထည့်တွက်ရဦးမှာ လေကိုကိုရယ်။ လူသားဆန်မှုလို့ပဲဆိုပါတော့......”
ရွှန်းပနေသော လရောင်အောက်တွင် ကလေး၏ မျက်ဝန်းများ စိုလက်တောက်ပ နေသည်။
“လူသားမဆန်ဘူးပြောရအောင် ကိုကိုတို့နှစ်ယောက် မတရားသဖြင့်လုပ်စားနေ လို့လား။ ကမ္ဘာကြီးကို ခြိမ်းခြောက်နေ လို့လား။ သူများထမင်းအိုး ရိုက်ခွဲနေလို့လား။”
ကြေးတန်းတိုက်ပြောဆိုပစ်လိုက်သော စကားများကို ကလေးက နာကျင်စူးရှစွာ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး ပြန်လည်ချေပရှာ သည်။
“ကပ်ဖဲ့ပြီး မပြောပါနဲ့ ကိုကိုရယ်။ အခြေအနေအားလုံးကို ကိုကိုက ပိုသိပါတယ်။ ကိုကိုတို့ မိသားစုရဲ့ နောက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်၊ နောက်ပြီး ဖိတ်စာတောင် ဝေထားပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတစ်ခုနဲ့ အဲဒီပွဲရဲ့သတို့သမီးလောင်း၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ သိက္ခာ၊ သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ အဲဒါတွေ အဲဒါတွေအပြင် အမြင်ကျဉ်းပြီး ရှေးရိုးဆန်လွန်းကြတဲ့ ကလေးရဲ့ မိဘတွေရဲ့ အမြင်တွေ၊ အရိပ်တွေ၊ ပြောဆိုကြမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရုန်းထွက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့...”
တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် ပထမဦးဆုံးအဖြစ် ကလေး၏ စကားသံများက ခါးသီးပူ လောင်စွာ နားစည်ထဲစီးစိမ့်ပျော်ဝင် လာသည်။ စူးနင့်ပူလောင်လွန်းသော ရင်ဘတ်ကဒဏ်ရာများ၏ ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ် မျက်ရည်များစည်းကမ်းမဲ့စွာ ကျဆင်းလာ၏။ ကလေးကို နှမြောစွာ ပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး ရူးနှမ်းစွာ၊ အထိန်းအကွပ်မဲ့စွာ ငိုကြွေးပစ်လိုက်သည်။
“ကိုကိုသိပါတယ်။ ကိုကိုနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကိုလက်မခံနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကလေးကို အဆုံးအရှုံးမခံနိုင် ဘူးကွာ။ ကလေးကို ကိုကို လက်မလွှတ်နိုင်ဘူး။ ဘယ့်သူ့ကိုမှ မပေးနိုင်ဘူး။”
နုန်းချိအားကုန်သွားအောင် ငိုကြွေးပြီးမှ တိုးလျှငြိမ်သက်လွန်းသော လေသံဖြင့် ကလေးက စပြောသည်။
“တစ်ချို့ အမှန်တရားတွေကို လက်ခံဖို့၊ နားလည်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ရင်ဆိုင်ဖို့ကျော်လွှားဖို့ပဲ လိုတာပါ။ အခုလည်း ကိုကို ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ ကျော်လွှားလိုက်ပါ။”
ကလေးပြောသလို ရင်ဆိုင်ရန် လိုအပ်သော သတ္တိများ မွေးမြူပျိုးယူရဦးမည်။ တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲသွားမည့် လမ်းကြောင်းကို မြင်ယောင်တွေးတောကြည့်ရုံဖြင့် ရူးသွပ် မူးလဲ သွားချင်မိသည်။ အထူးသဖြင့် ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမည့် ဘ၀တွင် ကလေးမပါတော့ဘဲ နေရစ်ခဲ့ရတော့မည်ဆိုသည့်အသိက တစ်ကိုယ်လုံးကို လောင်မြိုက်ပြာကျစေနိုင်လောက် အောင်ပူလောင်ခါးသီးလွန်းလှ၏။
တိကျရိုးရှင်းသော အဖြေထွက်လာပြီးနောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုများကိုအဆုံးသတ် ရပ်တန့်နိုင်သည့် စကားလုံးဆိုးကြီး များကို အားယူရွတ်ဆိုလိုက်သည်။
“ဟင့်အင်း အစ်ကိုပြန်ရင်ပြန်နှင့်လေ။ ခဏလောက်ဆက်နေလိုက်ဦးမယ်။ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်လောက်ပေါ့။”
“ဘာလို့လဲ။ မပြန်ချင်သေးရင် ကိုကိုစောင့်..”
“ဟင့်အင်း ကိုကိုပြန်နှင့်လိုက်တော့။ ကလေးလည်း မကြာတော့ပါဘူး ခဏနေရင်ပြန်မှာပါ။”
“ဟုတ်ပြီလေ။ အဲဒါဆိုရင် ကိုကိုပြန်တော့မယ်နော်။ အကြာကြီးလည်း ဆက်မနေနဲ့တော့....နော်။”
တုံးတိတိဖြေသံထွက်ပေါ်လာပြီးမှ သူမတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ လေးလံနှေးကွေးသော ခြေလမ်းများဖြင့် ကမ်းစပ်ဆီကို သူရွေ့လျားလိုက်၏။
ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဦးတည်သွားသော သူ့ခြေလှမ်းတိုင်း၏ မြေပြင်အကွာအဝေးသည် ဘ၀နှစ်ခု၏ ခြားနားခြင်းကို ကိုယ်စားပြုနေကြောင်း သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး နားလည်ထားကြပါသည်။
တသွင်သွင်စီးဆင်းနေသော မြစ်ပြင်၏ သောင်ပြင်ပေါ်တွင် လူတစ်ယောက် အားရပါးရ ငိုကြွေးနေသည်။
လရောင်တောက် တောက်တွင် ရွှဲစိုနေသော သူ့မျက်ဝန်းများ ရွန်းလဲ့နေသည်။ သူ့ဘေးတွင် သပ်ရပ်လှပသော မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာ တစ်ခု ငြိမ်သက်စွာ လဲလောင်း နေ၏။ မောပန်းနှုန်းချိစွာဖြင့် သူမတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ တစ်စုံတစ်ရာကို ဆုံးဖြတ်ထားသော သူ့နှုတ်ခမ်းများကို တိကျသပ်ရပ်စွာ စေ့ပိတ်ထား၏။ ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဖန်ရောင် မျက်ဝန်းများကခံစားချက် ကင်းမဲ့နေသည်။
သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးနောက် ရေစပ်သို့ သူလျှောက်သွားလိုက်သည်။
သူ့ခြေဖမိုးများကို အေးစိမ့်ကြည်လင်သော မြစ်ရေများဖြင့် ဖုံးအုပ်နှစ်မြှုပ်ပစ်လိုက်၏။ ထို့နောက် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဒူးအထိ၊ ပေါင်အထိ မြစ်ရေများမြင့်တက်လာသည်။
မြစ်ကြီးက အပြစ်မဲ့စွာ စီးဆင်းနေဆဲပင်.........
သောင်ပြင်ပေါ်တွင် မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲ ဖိတ်စာလေးတစ်ခုက ငြိမ်သက်စွာ.............လှဲလျောင်းလျက်…..။
ForThe People Like Us
How to AcceptaClose Friend's Sexual Orientation
ဒီဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ယနေ့ခေတ်လှုမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ အရေးပါအရာရောက်တဲ့အကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ကို ပြောဆိုဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိနိုင်ပါတယ်။
လိင်တူကြိုက် အမျိုးသားတွေ (Gay people)၊ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသမီးတွေ (Lesbians)၊ ပြီးတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အသွင်ပြောင်း လဲထားသူ(Transgender people) တွေဟာ ဟိုးယခင်ကနဲ့မတူ ပိုမို ဖော်ထုတ် ဖွင့်ဟလာကြတာကိုတွေ့လာရပါတယ်။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုဘာဆိုတာ ရှာဖွေဆဲပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်က သူတို့ကို လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု ကိစ္စဖြင့်ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ပြောဆိုလာပါက မည်သို့မည်ပုံတုန့်ပြန်ရမည်ကို သိပ်သိကြဦးမယ်မထင်ပါ။
ကိုယ်သိနေတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖွင့်ဟပြောဆိုလာတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လိုလက်ခံရမယ်ဆိုတာ မသိခြင်းသည် စာရေးသူတို့ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာဟုမှန်းဆရသော အခြေအနေတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအချက်ကတော့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတာ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုမသင့်လျော်ရာတစ်ခုခုကိုပြောလိုက်မိတာမျိုး မလုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ကိုယ်လှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းဟာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို စော်ကားနေတဲ့ အနေအထားကို သို့မဟုတ် အဆက်ဖြတ်ပစ်လောက်တဲ့အခြေအနေကို လျှောက်လှမ်းတဲ့ပုံစံဖြစ်မသွားဖို့ပါ။
စာဖတ်သူက သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအပေါ် လက်မခံနိုင်သေးပေမယ့် လမ်းလျှောက်တတ်စကလေးလို အစပျိုးခြေလှမ်း လေးတွေနဲ့အတူလျှောက်ကြည့်သင့်တာပေါ့နော်။
(၁) သူတို့နဲ့အလိုက်သင့် မျောနိုင်ရင်မျော
သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိုက်လျောနိုင်ခြင်းရှိမရှိ စာဖတ်သူအနေနဲ့တိတိကျကျစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကို မေ့လျော့ပစ်ပြီး သူတို့အား ဆိတ်ကိုကို (straight) တွေလိုပဲပြောဆိုဆက်ဆံဖို့ပြောလိုရင်း မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ သူတို့ဖွင့်ဟပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တဖျစ်တောက်တောက်မပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုထိရောက်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုးပိုမိုလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေက ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ဖွင့်ဟလာမလဲဆိုတာအပေါ်မှာမူတည်နေဦးမယ်လို့နားလည်ပါရဲ့။ ရယ်ရယ်မောမော စကားတွေဆိုနေရင်း မှ ပြောဆိုလာခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန် ထသွားထလာစကားအချို့ပြောဆိုဆွေးနွေးနေရင်းမှ ထုတ်ဖော်ပြောပြခြင်းဖြစ်စဉ်တွေဆိုရင်တော့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ လက်ခံနိုင်ကောင်းလက်ခံနိုင်မယ့် အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်သလို ကောင်းမွန်အဆင်ပြေတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုခုပေးနိုင် မယ့် အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူကို သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်က သူ့ဖြစ်တည်မှုအားဖွင့်ဟလာချိန်ဝယ် နားလည်ပေးနိုင်ကြောင်း အရင်လိုပဲ ခင်မင်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြသရာရောက်သလို စိတ်အားငယ်မှုများမဖြစ်သွားစေလိုတဲ့ လူသားဆန်မှုကိုပြသခြင်းမည်တဲ့ ပွေ့ဖက်နှစ်သိမ့်မှု တစ်ခါလောက်တော့ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ ဒီအပြုအမူမျိုးက အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်ကြင်နာပြတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးဆိုပေမယ့် ဖွင့်ဟ လာသူကလည်း စာဖတ်သူရဲ့ပွေ့ဖက်နှစ်သိမ့်မှုကို လက်ခံနားလည်ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ နုညံ့နွေးထွေးတဲ့ ပွေ့ဖက်မှုမျိုးဟာ လက်ခံနားလည်ပေးခြင်းကိုပြသခြင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို စကားလုံးပေါင်းများစွာနဲ့ပြောခြင်းအစား အပြုအမူလေးနဲ့တစ်ချက်ထဲပြသရာ ရောက်ပါတယ်။ အကြင်နာလွှမ်းသော နုညံ့တဲ့ထိတွေ့မှုဟာ အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရဲ့။
စိတ်ကို သက်သောင့်သက်သာအနေအထား Relax ဖြစ်အောင် ဖြေလျော့လိုက်ပါ။ ကိုယ်အထင်ကြီးလေးစားခဲ့တဲ့ ကိုယ်အားကျခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်အလွန်ခင်မင်ခဲ့ရသော သူငယ်ချင်း ယောက်ျားလေး သို့မဟုတ် မိန်းကလေးအပေါ် အရင်ကထားခဲ့သော အတွေးအမြင် ခံစားမှုတွေ ကို ပြန်လည်အာရုံကပ်ရင်း အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူရှိုက်ကာ စိတ်တွေကို ဖြေလျော့ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် သို့မဟုတ် ဘယ်လိုမျိုး သူနဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်? အလုပ်အကိုင်အတူတူလုပ်ကြစဉ်မှာ ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုအကူအညီပေးခဲ့တာ ဖေးမခဲ့တာ သို့မဟုတ် အရေးကြီးတဲ့အချိန်တိုင်း ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုသွေးချင်းနီးစပ်ခဲ့တာ? ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှု ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းအပေါ် ခင်တွယ်မှု အစစ်အမှန်တွေဟာ သူ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကြောင့် ပျောက်ပြယ်သွားသင့်သလား? သူကတော့ ဘယ်အကြောင်းအရာမှ မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။
အခုပြောဆိုဖွင့်ဟနေတဲ့ စကားစမြည်တွေမှာ စာဖတ်သူအတွက်အလေးပေးအချက်အလက်တွေမပါဘူးဖြစ်နေတာကို နားလည်ပေး လိုက်ပါ။ သူ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုစိတ်ကို ဘယ်လိုဖုံးကွယ်ခဲ့ရတယ် ဘယ်လိုအရာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ် မျှော်လင့်ချက် တွေကဘယ်လို ဆိုတာတွေကို ပြောဆိုချင်စိတ်များနေမှာသေချာပါတယ်။ စာဖတ်သူအနေနဲ့သူတို့လိုလိုလားလားပြောဆိုနေတဲ့ အကြောင်းအရာကနေ အခြားအကြောင်းအရာကိုပြောင်းပြောဖို့ ဖိအားမပေးသင့်ပါဘူး။
(၅) လိင်ကိစ္စအပေါ် ဥပဒါန်မဖြစ်သင့်ပါ
လိင်ကိစ္စ၌ စာဖတ်သူရဲ့အစွဲပေါ်အခြေခံပြီးအလေးပေးပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ လိင်ကိစ္စအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မီဒီယာအစုံနှင့် အခြားနေရာအစုံမှာပြောဆိုကြားမြင်နေရတာနဲ့ လုံလောက်ပါပြီ။ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုဆိုတာ လိင်အမျိုးစားတူ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်မှုတစ်ခုခုပြုကျင့်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်မဖွင့် မသတ်မှတ် ရပါဘူး။ ဒီကိစ္စက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆန်ပါတယ်၊ အဆိုပါလူရဲ့ ပင်ကိုတိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။
ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုအသွင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခြင်း - စာဖတ်သူက သာမန်လိင်ကွဲကိုပဲတိမ်းညွှတ်သူ (Straight) တစ်ယောက် ဆိုပါစို့၊ လိင်ဆက်ဆံမှုရမ္မက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆက်မပြတ် တွေ့ဆုံပတ်သက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတတ် ပါသလားမေးပါရစေ။ ဟုတ်ပါတယ် စာဖတ်သူအနေနဲ့ အဆိုပါအကြောင်းအရာကို အချိန်များများစဉ်းစားမိကောင်းစဉ်းစားမိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုစဉ်းစား ယူဆမိတာနဲ့ စာဖတ်သူဟာ တဏှာရူးကြီး နှာဘူးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့တော့ အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်ဆိုသင့်ဘူးလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
စာဖတ်သူဟာ အားကစားသမားတစ်ယောက်၊ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်၊ ရုပ်ရှင်ကြမ်းပိုးတစ်ယောက်၊ ဖခင်တစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်၊ ၀မ်းကွဲမောင်နှမတစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဒါတွေဟာ စာဖတ်သူရဲ့ ပုံသွင်သဏ္ဌာန်တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုစွဲလမ်းတယ် သို့မဟုတ် ဘယ်သူနဲ့အိပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသပ်သပ်သာဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံအထောက်အထားတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။
(၆) နှိမ်ချ ပြစ်တင်ဆက်ဆံခြင်းရှောင်ပါ
စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေက စာဖတ်သူကိုယုံကြည်လို့ ခင်မင်လို့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံလာမှုအပေါ်မှာ အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအသွင် သေးသေးနုပ်နုပ်အဖြစ် အပြစ်ရှာ သို့မဟုတ် စာဖတ်သူ့သူငယ်ချင်း ဂုဏ်သိက္ခာကျအောင်မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ သူ သို့မဟုတ် သူမကို ယခုဖြစ်တည်မှုကနေ မြန်မြန်ရုန်းထွက်လိုက်ဖို့ အဖြစ်ဆိုးတစ်ရပ်ကကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟန်ဖြင့် အတင်းအကြပ်မတိုက်တွန်းရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖြစ်တည်မှုတစ်ရပ်ဟာ စာတစ်ကြောင်း စာတစ်ပိုဒ်မဟုတ်ခဲ့လို့ပါပဲ။
(၇) သူငယ်ချင်းနေရာမှာ အစားထိုးဝင်ခံစားကြည့်ပါ
စာဖတ်သူအနေနဲ့ စာဖတ်သူရဲ့သူငယ်ချင်းအနေအထားမှာ ၀င်စားတွေးတောခံစားကြည့်ပါလား။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ ကာမဆက်ဆံ လိုစိတ်ရှိသူများကို အထူးတဆန်းမြင်တတ်ကြတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုမှာ စာဖတ်သူဘယ်လိုနေထိုင်မလဲတွေးကြည့်ပါ။ သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆထားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို တစ်စုံတစ်ယောက်အား စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်ဟ၀န်ခံမလဲ စိတ်ကူးကြည့် ပေါ့နော်။
ကဲအခုပဲ စာဖတ်သူရဲ့သူငယ်ချင်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လောကကိုဘယ်လိုမျက်နှာမူနေရသလဲ တွေးတောကြည့်ကြစို့။ သူ သို့မဟုတ် သူမ ဟာ ဘောင်ကျဉ်းလှတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခု သို့မဟုတ် အံဝင်မယ့်နေရာလေးတစ်ခုကိုတော့ သူ သို့မဟုတ် သူမအနေနဲ့ အသက်ရှူပေါက်အဖြစ် ကြိုးစားရှာဖွေနေထိုင်မှာသေချာတယ်။ အဲ့ဒီအရာက စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းကို အထီးကျန်မှုနဲ့ တသီးတသန့်ဆန်နေစေမှာတော့ အမှန်ပေါ့နော်။ LGBT လူထုအနေနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အခြားသူတွေက ရန်စောင်မုန်းတီးကြခြင်း ရန်လိုခြင်းတွေ မဖြစ်ရအောင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ အခြားသူတွေ မြင်ရတွေ့ရနေထိုင်ရ သက်သောင့်သက်သာ မရှိဖြစ်အောင် ပြုလုပ်မှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပညာတတ် ပညာရှင်မဆန်ဘူးလို့မြင်အောင် မနေဖို့ ရုတ်ခြည်းဆိုသလို ဆုံးဖြတ် နေထိုင်လိုက်တတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ နားလည်လက်ခံတတ်သော သူငယ်ချင်းတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရပါက သူ သို့မဟုတ် သူမဟာ ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုရလိုက်သလို စိတ်ထဲသိုဝှက်ထားသော အမှန်တရားများနဲ့ ခံစားချက်များကိုဖွင့်ဟပြီး ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံတတ်တာကြောင့် စာဖတ်သူသည်လည်း သူလိုအစစ်အမှန်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ရမှာပါ။
(၈) သူလိုအပ်တာကိုပြော သူပြောတာကိုနားဆင်ပေးလိုက်ပါ
လူနှစ်ယောက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြတဲ့ကိစ္စမှာ ပြောတာကောနားထောင်တာကော အချိုးညီမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ စာဖတ်သူ အခုဖတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စမှာလည်းပဲ စာဖတ်သူ့သူငယ်ချင်းပြောဆိုဖွင့်ဟနေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ဝယ် အာရုံစိုက် နားထောင်ပေးသင့်နားထောင်ပေးရပါမယ်။ မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ သဘောထားတွေကို ပြသဖို့ဆိုရင် စကားပြောဆိုခြင်းက အရေးပါတယ်ဆိုပေမယ့် မိမိတို့ရဲ့ နားလည်ခြင်းနဲ့ သိရှိနားလည်မှုတွေဟာ နားထောင်တတ်ခြင်းမှာ အထာကျပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်း စကားပြောအတိုင်းအဆပေါ် လေးစားသမှုပြုလိုက်ပါ။ အခုစကားစမြည်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာက စာဖတ်သူရဲ့ အကြောင်း မဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ။ သူတို့အကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောနေခြင်း မဟုတ်လား။
(၉) ခင်မင်မှုကို သူလေးစားတယ်ဆိုတာယုံလိုက်ပါ
စာဖတ်သူအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ကိုယ့်ခင်မင်မှုအပေါ်တန်ဖိုးထားလေးစားလို့ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းအပေါ် ယုံကြည်ရပါမယ်။ အချို့သောကိစ္စများမှာတော့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကိုယ့်ဗီဇအရပဲဖြစ်ဖြစ် “ဟေ့ဟေ့….ငါ့ကိုတော့လာမနွယ်နဲ့နော် ပတ်သက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါက်စေတဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုးနဲ့ စတင်ဆက်ဆံမိတတ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ့ သူငယ်ချင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နားဆင်နေရာမှာ ဆက်ဆံနေရာမှာ သက်သောင့်သက်သာ အေးအေးဆေးဆေးပဲဆိုတဲ့ စိတ်အခြေအနေမျိုးနဲ့ရှိနေသင့်တာပေါ့လေ။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အနေနဲ့ သူ့စိတ်တိမ်းညွတ်မှုတွေ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ရှေ့ဆက်လက်ဖို့မကူညီခိုင်းပါဘူး။ ဆိုလိုတာကဗျာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်မိတဲ့ မိန်ကလေးတစ်ယောက်အပေါ်မှာပဲ ချစ်ခင်နှစ်လိုစိတ်ဖြစ်နေနိုင်သလား ပတ်သက်မိတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကို ချစ်စိတ်ဝင်နိုင်သလားဆိုတဲ့ ဆိုလိုချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက စာဖတ်သူအပေါ်ကိုခံစားချက်တွေတိမ်းညွှတ် လာမလားဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးမရှိရပါဘူး။ သံသယဖြစ်စရာ လို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါဖြစ်မိတယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားသူ (Straight) ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုး နဲ့မှ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာ သေချာကြောင်းဆိုလိုတဲ့ စကားပြောဆို တုန့်ပြန်မှုမျိုးလေးတွေနဲ့ ရပ်တည်မှုပြသင့် တာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူဟာ သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာ တစ်မျိုးတစ်မည် စိတ်ခံစားမှုမျိုးရှိနေတယ် ငြိတွယ်မှုဖြစ်တည်နေတယ် ဆိုရင်တော့ စူးစမ်းချင်စိတ်ပြင်းပြမှုတစ်ခုခုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် အတွေ့အကြုံကော လိင်တူအတွေ့အကြုံကော စမ်းသပ် လေ့လာလိုစိတ်ကြောင့် အမှတ်မထင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအပေါ်မှာ တစ်မျိုးတစ်မည်ပုံစံ တုန့်ပြန်ဆက်ဆံလိုက်မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ သူငယ်ချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ခြင်းရဲ့ အားသာချက် အရေးသာမှု အကျိုးကျေးဇူးတို့ကို အလေးမူကာ စာဖတ်သူရဲ့ စူးစမ်းချင်စိတ် စမ်းသပ်ချင်စိတ်တွေကို အလိုမလိုက်သင့်ပါဘူး။
(၁၀) သူ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို မပြောင်းလဲပေးနိုင်တာ လက်ခံပါ
စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းလိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအပေါ်မှာ ပြောင်းလဲအောင်ပြုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံရပါမယ်။ လိင်စိတ် တိမ်းညွှတ်မှုဆိုတာ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲဆိုတဲ့ အရေးပါသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာအချက်တစ်ခုအဖြစ် စိတ်ထဲတ၀ဲလည်လည် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့သူငယ်ချင်းကတော့ ဒီနေရာမှာ သံသယပွားမနေပါဘူးလေ။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သည်ဆိုပါက သူတို့ရဲ့စကားလုံးတွေကိုသာယူဆောင်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဘ၀နေထိုင်မှုဟန်ပန်တစ်ခုအဖြစ် သရုပ်ဖော်မယ့် ဘာသာစကား အချို့ကို သုံးနှုန်းပြောဆိုတာမျိုးရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ ဥပမာ - သူ့အရပ်အမြင့် ပုတာ မြင့်တာ ၊ သူစီးတဲ့ ရှူးဖိနပ်ကြီးတာ သေးတာ စသည့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွဲခြားနှိမ်ချမှုမရှိဘဲ ပြောဆိုဆက်ဆံလေ့ရှိသလို သူ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားစမြည်ပြောဆိုနေရာမှာလည်း ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုအသွင်မဆောင်မိစေလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို တည့်မတ်လမ်းညွှန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အားထုတ်မှုထက် လက်သင့်ခံခြင်းနှင့် အကြင်နာမေတ္တာ ဆိုတာက ကောင်းကျိုးပိုမိုများတဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုစီ ခရီးရောက်စေပါလိမ့်မယ်။
(၁၁) သူလိုအပ်နေချိန်မှာ ဖေးမပေးလိုက်ပါ
သူငယ်ချင်းရဲ့ အလိုအပ်ဆုံးအချိန်တွေတိုင်း စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဖေးမကူညီပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ရဲ့ အလွန်အတွင်းကျလှတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောဖို့ ယုံကြည်ရလောက်သူအဖြစ် စာဖတ်သူဖြစ်နိုင်ရပါရဲ့လေ။ အကယ်၍ စာဖတ်သူအနေနဲ့ သဘောမကျဖြစ်မိတယ်ဆိုရင်တောင်မှ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကို ညင်သာစွာယူထားသင့်ပါတယ်။ သူပြောလာတဲ့ သတင်းစကားကို အနည်းဆုံးတော့ အေးငြိမ်းငြင်သာလက်ခံပြီးမှ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ပြောဆိုရမယ်ဆိုတာ သတိထားကာ တုန့်ပြန်ထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်ပါနော်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုမှ ရှေ့ဆက်ဖို့ အဆင်မပြေဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို ပြောပြလိုက်ပါ။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ သဘောမကျတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် စာဖတ်သူရဲ့ ဂရုတစိုက်ရှိမှုတွေ၊ ငဲ့ငဲ့ညှာညှာနဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တတ်တာတွေကို သူငယ်ချင်းက ငံ့လင့်မှာတော့သေချာပါတယ်။ တစ်ခုပဲ တစ်ခုပဲ သတိရလိုက်ပါ စာဖတ်သူဟာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သော သူ သို့မဟုတ် သူမကိုယ်တိုင် ဖြစ်တည်မှုကို မြင်သာအောင်ပြခဲ့ပြီးသောသူ အရေးပါသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။
(၁၂) သူရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ပါစေ
စာဖတ်သူအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့စိတ်ချယုံကြည်မှုကို အလေးထားထိန်းသိမ်းပါ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်နိုင်တော့ဘူး ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုး မလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးရှိနေဆဲ သူ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကို ထောက်ထားကာ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အတွင်းရေးကိစ္စများကို လေးစားသမှုရှိသင့်ပါတယ်။ စာဖတ်သူဟာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်မှာ ယုံကြည်ထိုက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုထိန်းသိမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ပေါ့နော်။
စာဖတ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူတို့ အစီးမကပ်တော့ပါလားလို့ အခြားသူတွေက စကားတင်းဆိုလာကြတဲ့အခါမှာ စာဖတ်သူက “ကျနော်နဲ့သူ နေတဲ့နေရာက တခြားစီလေ၊ ပြီးတော့ အကြောင်းမဆက်စပ်မိတော့တာကြောင့်မတွေ့ဖြစ် မပေါင်းဖြစ်တော့တာပါ” လို့ ခပ်ရိုးရိုးလေးသာ ပြောဆိုလိုက်ပါ ခင်ဗျ။
(၁) စာဖတ်သူအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းကို သူပြောတာထက်ပိုမိုပြီး အခြားသူများကို တစ်ဆင့်ပြန်ဖွင့်ပြောတတ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ခြင်းကို သတိရပါ။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနုတ်သဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်မျိုး ခံစားမိတာ၊ သက်သောင့်သက်သာ ခံစားချက်မျိုး သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်နေသလိုမျိုး စိတ်ခံစားမှုတွေရနေမိတာတွေ ဖြစ်မိတယ်ဆိုရင် လူသူမများတဲ့ နေရာဝယ် ခဏထိုင်ကာ ကိုယ်ဘယ်လိုတွေ ခံစားနေရတာလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုယုံကြည်မှု ဘ၀ဟန်ပန်တွေက ဒီစိတ်ခံစားချက်ကို ရစေတာလဲဆိုတာတွေကို သေချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ဒီလို အကြောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးလို့ရမယ့်သူ တစ်ယောက်ကို ရှာဖွေကာ သတင်းစုံလင်ရယူတာမျိုး၊ သို့မဟုတ် အထောက်အပံ့တစ်ခုလောက်ရယူတာမျိုးလုပ်ဖို့ လမ်းညွှန်ပါရစေ။ စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်များ၊ စာဖတ်သူရဲ့ ယုံကြည်ချက်များကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူခြင်းရှိပါ။
တစ်ခုသိထားရမှာက သူတို့သည် ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်လိုလူမျိုးကိုသာချစ်ခင်ရမယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်မထားသလို စာဖတ်သူအနေနဲ့ သူတို့ ဘယ်သူ့ကိုချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမချစ်ရဘူးလို့ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
(၂) စာဖတ်သူအနေနဲ့ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သင်ကြားလေ့လာမှုပြုပါ။ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နားလည်နေနိုင်ဖို့အတွက် LGBT လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ သမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကို ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် နားလည်နိုင်ဖို့လွယ်ကူလာမှာဖြစ်သလို သူတို့တွေရဲ့ အကြောင်းခြင်းရာတွေအပေါ် အလွယ်တကူလက်ခံနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာသမှု စူးစမ်းမှုပြုဖို့အတွက် www.glbthistory.org နဲ့ www.pflag.org (Parents, Families & Friends of Lesbians and Gays) Website တွေမှာ သတင်းရစ်မြစ်ကောင်းအချို့ကိုရနိုင် ပါတယ်။
(၃) အကယ်၍ စာဖတ်သူရဲ့သူငယ်ချင်းက တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံသည့်အခါ အဆိုပါလူကိုတွေ့ဆုံမြင်တွေ့ကြည့် စူးစမ်းချင်စိတ် ဖြစ်မိသည်ဆိုပါက စာဖတ်သူဟာ သူငယ်ချင်းရဲ့ဘ၀အကြောင်းအရာတွေအပေါ် မသိစိတ်က စိတ်ဝင်စားမိကြောင်း ဖော်ပြနေတာပါပဲ။ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းရဲ့ အရေးပါအရာရောက်လှသော သူငယ်ချင်းကဲ့သို့သော အခြားလူတစ်ယောက်ယောက်ကို မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် စာဖတ်သူရခြင်းပါ။ စာဖတ်သူရဲ့သူငယ်ချင်း ဘယ်လိုစိတ်ခံစားချက်နည်းလမ်းတွေရှိသလဲ နားလည်မှုတစ်ခုထားရှိဖို့ အကူအညီရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။
(၄) စာဖတ်သူက သူငယ်ချင်းကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားမိချိန် ဘယ်လိုမှနားမလည်တတ်သောအကြောင်းအရာများရှိလာပါက သူငယ်ချင်းကို ဖွင့်ဟမေးမြန်းလိုက်ပါ။ ကိုယ်မသိတာ နားမလည်တာကို စူးစမ်းမှုမပြုဘဲ ထူးဆန်းအံ့သြဖို့ကောင်းသောအကြောင်းအရာတစ်ရပ်သဖွယ် စိတ်ထဲမှာပဲ ထားလိုက်ခြင်းမပြုသင့်ပါဘူး။ မေးခွန်းတွေကိုဖွင့်ဟလိုက်ပါ အဖြေများစွာပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းဟာ လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သာဖြစ်ပြီး LGBTQ လူထုရဲ့ အတွေးအမြင်ယူအဆတွေဘယ်လို ရှိတယ် ပြန်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးဆိုတာကိုပါ။ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းက သူသိသမျှပြန်လည်ဖြေကြားတယ်ဆိုရင်လည်း LGBTQ လူအုပ်ထဲက အ၀န်းအ၀ိုင်းတစ်ခုစာသာ ဖြေကြားနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုရပါမယ်။ တကယ်လို့များ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူက စာဖတ်သူမေးသော မေးခွန်းတွေကို မဖြေကြားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပါက အဆိုပါမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေများကို နှစ်ဦးသား အတူတကွ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
(၅) တကယ်လို့များ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက စာဖတ်သူအပေါ်မှာ ခံစားချက်တစ်စုံတရာရှိနေကြောင်း ၀န်ခံလာနိုင်တယ် သို့မဟုတ် စာဖတ်သူကို စွဲလမ်းတွယ်ငြိနေတယ်ဟု ၀န်ခံလာပါက ပြဿနာတစ်ရပ်အဖြစ် မပြုလုပ်လိုက်သင့်ပါဘူး။
“ငါ့ကိုမြှောက်နေတာလားဟ၊ ဒါပေမဲ့ ငါက straight လေ’’ ဆိုတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ကြားရဖို့ မစွမ်းသာ သို့မဟုတ် စိတ်မပါသော လူနည်းစုလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးကြုံဆုံလာရချိန်ဝယ် ယေဘုယျ အကြောင်းပြချက်အချို့အနေနဲ့ စိတ်လုံးဝမထိန်းနိုင်စွာ ပေါက်ကွဲတုန့်ပြန်မှု သို့မဟုတ် တစ်ခုခုဆိုးရွားတာတွေ အဲ straight အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ LGBT သူငယ်ချင်းနဲ့ အဖြေရှာရာတွင် လုပ်ဆောင်တတ်သော သူတို့ရဲ့ ထူးဆန်းမှုတွေနဲ့ တုန့်ပြန်တတ်ပါတယ်။
ဒါကအတော်ဆိုးရွားတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက် ခံယူချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ မိမိရဲ့စိတ်ထဲကစူးစမ်းလိုစိတ် စမ်းသပ်လို စိတ်တွေကို အခြားသောတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံစမ်းသပ်တဲ့အခါသုံးဖို့ကောင်းပါတယ်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအပေါ်တော့ မလုပ် ဆောင်သင့်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ စည်းဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီး သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အချို့ကို ဖော်ပြလာရင် လည်းပဲပေါ့နော်။
ဘယ်သူမဆိုကတော့ အသုံးချခံဖြစ်ဖို့ မကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှင်းလင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသွားတဲ့အထိ ခဏတာ သိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘော်ဒါနဲ့ ဟိုစပ်စပ်သည်စပ်စပ်မပြုလုပ်လိုက်ပါနဲ့။
ကောင်းပါပြီ….စာဖတ်သူအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ့အပေါ် တကယ့်ကို စိတ်ခံစားချက်အချို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ကိုပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းက အကူအညီရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက စာဖတ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခွင့်အလမ်းတစ်ခုခု ရယူချင် စိတ် ရှိကောင်းရှိနေနိုင်သေးတာကိုး။ ဒါပေမဲ့နော် အသေအချာပြောလိုတာက စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် သေချာဆန်းစစ် ကြည့်သင့်သေးတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ဆန္ဒရဲ့ ဟိုးအတွင်းဘက်ကျကျ ခံစားချက်တွေ ပြီးတော့ ဘယ်ကို ဦးတည်သွားနိုင်မယ်မှန်းမသိသော စိတ်ဝင်စားမှုတွေက ရှိသေးတာမို့လေ။ စာဖတ်သူ “ဘယ်လို” ဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်း ရိုးသားလိုက်ပါ ခင်ဗျ။
(၆) တကယ်လို့ သူ သို့မဟုတ် သူမက စာဖတ်သူကို ထိုးနှက်သွားမလားလို့ စိုးထိတ်မိပါလျှင် တင်းမထားဘဲ စိတ်ကိုလျော့ထား လိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်းအများစုကတော့ မပြုလုပ်ကြပါဘူး (အခြားသော ကပျက်ကချော်များနှင့်စာရင်ပေါ့)။ တကယ်လို့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူက ပြုလုပ်လာလျှင်လည်း ရပ်တန့်လိုက်ဖို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ တောင်းဆိုလိုက်ပါ။ သူ သို့မဟုတ် သူမဟာ စာဖတ်သူ စွဲလမ်းတွယ်ငြိလို့ရမယ့် လိင်အမျိုးအစား အသင်းဝင်များ၊ စိတ်မ၀င်စားသူများဖြစ်ခဲ့နိုင်တာကိုး။
(၇) စာဖတ်သူရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ PFLAG (Parents and Friends of Lesbians And Gays) အသင်းအဖွဲ့ အုပ်စုတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်တော့ အထောက်အပံ့ရမယ့် သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ပြည်တွင်း အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ ကောလိပ်အများစုမှာ LGBTQ လူထုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းတွေ အခုနောက်ပိုင်းရှိလာပါပြီ။ သူတို့အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာ စာနာရိုင်းပင်းတတ်မှု နဲ့ အသိအမြင် နားလည်မှုတွေထားတတ်ဖို့ စာဖတ်သူကိုအကူအညီပေးနိုင်ရုံမက သူငယ်ချင်းနဲ့ ဘယ်လို ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်ရမယ် ပြီးတော့ ဘယ်လိုအထောက်အပံ့အကူအညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကို သက်တူတန်းတူ အဖော်အသင်း အသစ်တစ်ခုပေးပြီး သင်ပြ လမ်းညွှန်ကူညီမှုပြုနိုင်ပါတယ်။
(၁) သူငယ်ချင်းအပေါ် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှု သို့မဟုတ် ရောထွေးနေတဲ့ အချက်ပြမှုတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အဲ့ဒီဟာတွေက စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းကို အားတက်ဖို့မြှောက်ပင့်ရာမရောက်ပါဘူး။ ပြက်လုံးတစ်ခုမှန်းသိသာတယ် နောက်ပြီး လူတိုင်း ကြည့်ရှုနားလည်နိုင်တဲ့ ဟာဖြစ်တယ်လို့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ယုံကြည်ခံစားမိသော်လည်းပေါ့နော်။ စာဖတ်သူရဲ့သူငယ်ချင်းဟာ စာဖတ်သူဆော့ကစားစရာ အရုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ သူ သို့မဟုတ် သူမကို ကစားစရာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးမချသင့် မပြုလုပ်ရပါဘူးဗျာ။
(၂) မိမိကြားလိုက်ရသော သတင်းသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာတုန့်ပြန်မှုမပြုခင် စာဖတ်သူအနေနဲ့ အချိန်အနည်းငယ် ယူသင့်ပါ တယ်။ ကြားရသော သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ စာဖတ်သူခံစားနေမိတဲ့နည်းလမ်းအချို့ဟာ မနက်ဖြန်မှာတော့ တကယ့်ကို သီးပွင့်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ။ စာဖတ်သူရဲ့ အစဦးတုန့်ပြန်နိုင်ချက်ဟာ အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်တောင်မှ ဖွင့်ဟခံရသော အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလွယ်တကူ နာယူနိုင်ဖို့ လတ်တလောကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒီနေ့ အလွယ်တကူ မှတ်သားခြင်းနဲ့ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်မှုဟာ မနက်ဖြန် သို့မဟုတ် သဘက်ခါမှာတော့ အားလုံးသော အကြောင်းအချင်းရာတွေနဲ့ပတ်သက်၍ အမြင်ရှုထောင့်အသစ်များကို ရရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Alex Aung (26 March 2016)
(တစ်ခုခုများ အကြံပြုချင်တာ ဝေဖန်ချင်တာရှိရင် kyawkyawster@gmail.com သို့မဟုတ် http://www.facebook.com/alex.aung ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။)
Ref: Wikihow’s How to AcceptaClose Friend's Sexual Orientation
Posted by Alex Aung at 1:30 PM No comments:
Labels: ဘာသာပြန်, ဆောင်းပါး
သင့်ရဲ့*#^! နဲ့ပက်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေ ဘာတွေတွေးမိ...
သူမ ဘာကြောင့် သင်နဲ့ တူတူအိပ်သလဲ